MCSA Certified Professional - Su'aalo iyo Jawaabo Waraysiga ITS
Microsoft wuxuu bixiyaa shahaadooyin cadcad oo caan ah oo ka mid ah shahaadada Microsoft Certified Solutions ama shahaadada MCSA si ay kuugu tababbarto waxqabad aad u muhiim ah si aad u dhammaystirto awoodda shabakadda kombuyuutarka ama agaasimaha maamulka PC. Baadhitaanka cinwaanada labada is-waydiineed ee loogu talagalay qaybta ugu badan ee la waydiiyo shahaadooyinka MCSA shahaado haysta.
1. Waa maxay qaybta codsiga?
J: Qaybaha arjiga waa liisaska hagaha ee dib loo soo celiyo meelaha xakameysan. Kuwani waa qayb ka mid ah qaab-dhismeedka Hagaha ee Hawl-galka ah. Xakameyaha xayawaanka ah ee lagu dhex daray habka qashinka buugga ayaa leh dhalmo qaybtaas. Tilmaamaha iyo sifooyinka isticmaalka isticmaalka ayaa yarayn kara dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa. Qaybaha araajidu waxay xoogga saari karaan kaliya hal boos oo ku yaala gobolka bannaan oo aan ahayn dhammaan qaybaha buugta. Tani waxay ka dhigeysaa mid aad u faa iidaysan oo xad-dhaaf ah.
2. Maxay tahay aagga keydka Active Directory?
A: Diiwaanka Active Directory waxaa laga saarayaa kontoroolayaasha aagagga waxaana laga heli karaa codsiyada shabakada. Dhammaan deegaanku waxay noqon karaan koontaroolayaal meeleyn ah oo ay ku hayaan xogta keydka Active Directory ee C: \_ windows \_ Ntds \_ Ntds.dit
3. Maxay yihiin sifooyinka cusub ee lagu soo bandhigay Directory ee 2008?
A: Akhri kaliya kantaroole xadka iyo Nidaamka Dheer ee Cuntada
4. Maxay tahay dayactirka Windows Server?
A: Windows Backup Server waa muuqaal ka baxsan Windows 2008 oo bixiya xalal kala duwan oo ku saabsan hoos u dhaca macluumaadka ku saabsan PC-gaaga haddii ay jirto dhacdo niyadjab ama qaab kale. Windows Backup wuxuu xoojin karaa diiwaanada lamaanaha oo dhan. Xoojinta adeegga ayaa la heli karaa iyada oo loo marayo khadadka amariga iyo maamulka ayaa ku kalsoon.
5. Maxay ka gudubtaa luuqadaha?
A: Baaskiil waditaan waa waa warqad jireed oo loo isticmaalo in la dhigo goobo ficil ah iyo wuxuu leeyahay qaab-dhismeed goobeed iyo qaab qoraal ah.
6. Maxay yihiin darawaliinta synthetic?
Dareemayaasha synthetic waa kuwo ka duwan kana sareeya kuwa soo-saarka ee shaqadooda. Kama badalan barnaamijka kale in ay noqdaan kuwa laga yaabo, inay sameeyaan qalab kale oo qalab culus oo ah marxalad faneed.
7. Waa maxay macmiilka macaamilka?
Abaabulka Muuqaalka waa hab macquul ah oo lagu xalliyo oo laga saari karo OS ama qaab ka macaamiisha ah oo diyaar u ah inay galaan. Waxaa jira noocyo badan oo macquul ah oo mashiinno ah oo qaar ka mid ah oo ay ku jiraan mashiinnada kombuyuutarada qaarkood inta aanay samayn. Haddii ay dhacdo in qaabka shaqeyntu si gaar ah loo kontaroolo, macaamiishu waxay u baahan yihiin inay galaan mashiishooda iyadoo loo marayo shabakad aqoonsanaysa shirwayn fog. Diyaargarowga macmilka macaamilka waxaa lagu qabtaa beeraley adeeg ah. Qadooyinkan oo kale, codsiyada sida kiniinnadu waxay ku biiri karaan mishiinka miyiriga ah. Mashiinka farsamada waxaa loo heli karaa shaqsi ahaan waxaana loo qaabeyn karaa qaabka uu u baahan yahay. Tani waa habka ugu caansan ee loo aqoonsado iyo ugu sahlan ee helitaanka iyo isticmaalka sanka macallimiinta.
8. Waa maxay kaydka laanta?
BranchCache ™ waxaa loogu talagalay in lagu wanaajiyo jawaab celinta codsiyada iyo in la yareeyo isticmaalka WAN xiriir si markaa loo adeegsado meelo ka baxsan meelaha fog. PC-yada fog ayaa isticmaala kaydka macluumaadka ee lagu hayo gudaha si loo yareeyo dhaqdhaqaaqa ku xirnaanta LAN. Dareemaha waxaa laga saari karaa server-yada laanta (Qaabka Cached Cache) ama waxaa loo qoondeeyn karaa iskudubarida kombiyuutarada macaamiisha (Qaabka Cache Distributed).
9. Waa maxay Gaaritaanka Tooska ah?
Direct Access waxay awood u siiyaan macaamiisha si ay u geli karaan boggaga internetka, codsiyada iyo waraaqaha shabakada gudaha ee si ammaan ah iyada oo aan loo baahnayn in lala xiriiriyo shabakad khaas ah oo khaas ah (VPN). Shabakadda gudaha waxaa sidoo kale loo yaqaan shabakad gaar ah ama intranet. Mar kasta oo la isku xiro kombiyuutarada tooska ah ee awood-galinta ah oo leh internetka, iyadoon loo eegin suurtagalnimada in tani ay dhacdo ka hor inta uusan macmiilku saxeexin, Gaaritaanka Tooska ah wuxuu isku xiraa xidhiidh isku-duuban oo dhexmara shabakada gudaha. Macaamiishu uma baahna inay tixgeliyaan farqiga u dhexeeya intranet. Kumbiyuutarrada fog ayaa la kormeeri karaa meel ka baxsan goobta shaqada ee maamulka IT-da, inkastoo marka kumbuyuutarada aysan la xiriirin VPN.
10. Waa maxay DAC?
Microsoft Control Control Access ama DAC waa aaladda maamulka xogta ee Windows Server 2012 taas oo u oggolaanaysa maamulayaasha inay xakameeyaan goobaha gelitaanka. Waxay isticmaashaa habab xoog leh si ay u oggolaadaan maamulayaasha in ay daraasad ku sameeyaan kuwa soo dhoweeya diiwaanada keli ah. Dukumiintiyadu waxay noqon karaan kuwo jidh ahaan ama dabiici ah.